H2SO4 + KI + Na2Cr2O7 → H2O + I2 + Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(NA4)3
acid sulfuric potassium iodide Sodium dichromate; Sodium bichromate; Cusbada Dichromic acid biyaha iodine sulfate sodium sulfate potassium Chromic sulfate; Chromium (III) sulfate
(digo yara) (rnn) (rnn) (lng) (rnn) (rnn) (rnn) (rnn)
(xoog leh) (tiim) (cam cam) (xoog leh) (tiim) (trung) (trung) (àm)
1 1 1 1 1 1 1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2SO4 + KI + Na2Cr2O7 → H2O + I2 + Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(NA4)3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa KI (potassium iodide) waxay la falgashaa Na2Cr2O7 (Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium cusbo)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo I2 (iodine) iyo Na2SO4 (sodium sulfate) iyo K2SO4 (potassium sulfate) iyo Cr2 (SO4) 3 (Chromic sulfate; Chromium (III) sulfate)?
Dhacdada ka dib H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa KI (potassium iodide) waxay la falgashaa Na2Cr2O7 (Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium cusbo)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Cr2 (SO4) 3 (Chromic sulfate; Chromium (III) sulfate), oo ka muuqda dhamaadka jawaab celinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Na2Cr2O7 (Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid saltdium salt), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2SO4 + KI + Na2Cr2O7 → H2O + I2 + Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(NA4)3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Na2Cr2O7 (Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium cusbo)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2Cr2O7 (Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2Cr2O7 (Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium salt) sida falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jidheed ee H2O (Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium cusbo)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee I2 (Sodium dichromate, Sodium bichromate, Dichromic acid disodium cusbo)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh I2 (iodine) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2SO4 (Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium cusbo)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2SO4 (sodium sulfate) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee K2SO4 (Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium cusbo)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2SO4 (potassium sulfate) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Cr2(SO4)3 (Chromic sulfate; Chromium(III) sulfate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cr2(SO4)3 (Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cr2(SO4)3 (Chromic sulfate; Chromium(III) sulfate) badeecad ahaan?
4Na2SO3 → 4Na2S + 3Na2SO4
sulfite sodium sulfide sodium sulfate sodium
4 4 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4Na2SO3 → 4Na2S + 3Na2SO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Na2SO3 (sodium sulfite)?
Heerkulka: 600 - 700 ° C
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Na2S (sodium sulfide) iyo Na2SO4 (sodium sulfate)?
Dhacdada ka dib Na2SO3 (sodium sulfite)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Na2SO3 (sodium sulfite), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4Na2SO3 → 4Na2S + 3Na2SO4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Na2S (sodium sulfite)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2S (sodium sulfide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2SO4 (sodium sulfite)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2SO4 (sodium sulfate) badeecad ahaan?
H2SO4 + 2NaHS → H2S + Na2SO4
acid sulfuric Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide hydrogen sulfide sulfate sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2SO4 + 2NaHS → H2S + Na2SO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa NaHS (Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2S (hydrogen sulfide) iyo Na2SO4 (sodium sulfate)?
Dhacdada ka dib H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa NaHS (Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2SO4 + 2NaHS → H2S + Na2SO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaHS (Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaHS (Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaHS (Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee H2S (Sodium hydrogen sulfide, Sodium hydrosulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2S (hydrogen sulfide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Na2SO4 (Sodium hydrogen sulfide, Sodium hydrosulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2SO4 (sodium sulfate) badeecad ahaan?
acid sulfuric sodium peroxide hydrogen peroxide sulfate sodium
(Lỏng) (Ron) (lng) (rnn)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2SO4 + Na2O2 → H2O2 + Na2SO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2SO4 (sulfuric acid) waxay kaga falcelisaa Na2O2 (sodium peroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O2 (hydrogen peroxide) iyo Na2SO4 (sodium sulfate)?
H2SO4 ayaa la falgala Na2O2
Dhacdada ka dib H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa Na2O2 (sodium peroxide)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Na2O2 (sodium peroxide), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2SO4 + Na2O2 → H2O2 + Na2SO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Na2O2 (sodium peroxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2O2 (sodium peroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2O2 (sodium peroxide) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta H2O2 (hydrogen peroxide)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O2 (sodium peroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O2 (hydrogen peroxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2SO4 (sodium peroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2SO4 (sodium sulfate) badeecad ahaan?